“Wax ciyaartoy ah kama soo qaadanayo Portugal,”. Muxuu hadalkan ula jeedaa Jose Mourinho – Gool FM
“Wax ciyaartoy ah kama soo qaadanayo Portugal,”. Muxuu hadalkan ula jeedaa Jose Mourinho
(Lisbon) 31 Maajo 2016. Tababaraha cusub ee Man United Jose Mourinho ayaa ku sugan dalkiisa hooyo ee Porutugal halkaa uu cashar ku saabsan tababarka kubbada cagta uu u soo jeedinayo arday dhigata jaamacadda Lisbon.
Tababaraha lagu naaneyso Sepcial One ayaa la filayaa in dabayaaqada usbuucan uu daaha ka rogo magac cusub uu ku soo biiriyo kooxdiisa cusub ee Red Devils.
Laakiin waxaa yaab ahayd in khudbadii uu ka jeedinayay Lisbon University uu ka sheegay inuusan la soo wareegeyn ama uusan keeneen kooxda Man United xiddig ka soo jeeda dalkiisa Portugal.
Ilaa hadda lama kala caddeyn waxa uu ula jeedo hadalkaa ma wuxuu ula jeeday inuusan la soo wareegeyn laacib ka tirsan horyaalka Portugal ee Primera Liga mise wuxuu ula jeedaa inuusanba la soo saxiixaneyn laacib u dhashay dalka Portugal.
Sikastaba, Man United ayaa si xoogan loola xiriirinayay xiddiga Valencia Andre Gomes, kaa oo lix kulan u saftay xulkiisa Portugal.
Red Devils ayaa sidoo kale ku guul darreysatay dadaalkii ay ugu jirtay da’yarka reer Portugal ee naadiga Benfica Renato Sanches kaa oo lacago qaali ah ugu biiray kooxda xafidaneysa horyaalka La Liga ee Bayern Muinch.
Pogba oo guri cusub ka iibsaday halka ay ku ciyaarto Barcelona...(Waa sidee xaalka?)
Maxkamadeynta Messi iyo aabihii oo maanta ka bilaabatay magaalada Barcelona